Adigu Sidee Ayaad Bulshada u Saameyn Kartaa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — February 15, 2020
Bulsho waa koox isku af, dhaqan iyo diin ah oo ku nool hal meel, waxa ay sameeyaan nolol guud, sababtoo ah aadanuhu kaligiis masameyn karo nolol, noloshu waxa ay ku xirantahay inta aad la nooshahay iyo meesha aad iskula nooshihiin.
Tags: Adigu Sidee Ayaad Bulshada U Saameyn Kartaa?
Next post Sideen Kuheli Karnaa Aayodhiinta (iodine)?
Previous post Dhaqaalaha iyo Maalgashiga Dadka